♥️Private Pool Villa #ukushona kwelanga kanye nombono we-paddy@Megananda - I-Airbnb
♥️Private Pool Villa #ukushona kwelanga kanye nombono we-paddy@Megananda
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Anda
U-Anda Ungumbungazi ovelele
"I-Megananda Villas" itholakala enyakatho ye-bud. Cishe imizuzu eyi-15 ukusuka edolobheni. I-villa izungezwe imvelo. Ifanele umbhangqwana noma umhambi ohamba yedwa ofuna ukuhlala ngokukhululeka.
Kuyi-instagramable, yesimanjemanje & ne-minimalist yangasese eyakhelwe indawo yokuhlala.
Ikhefi, indawo yokupaka yamahhala, igumbi lokulala elikhulu, ubhavu wobuciko, ishawa eshisayo, ichibi langasese le-infinity ehlangothini lokushona kwelanga, ukubukwa kwerayisi, ijimu, ingadi evulekile efanele i-yoga, i-wifi 20mbps, nekhebuli ye-TV.
I-Megananda Villas iwuhlobo lokuphila okuyimfihlo kwesimanje nokunethezekile. Kuyisinqumo esingcono kakhulu phakathi nalolu bhubhane ukuhlala nathi njengoba silungisa umthetho wethu ngokusekelwe esimweni sobhubhane njengokuthi: ithimba lethu lisebenzisa imaski yobuso ngesikhathi sokusebenza, ukuskena umzimba kwansuku zonke nge-thermometer ebomvu ye-infra kokubili kwesivakashi nabasebenzi, isibulala-magciwane nsuku zonke. Ukufafaza kumboze yonke indawo, isicoci sezandla kanye nokugeza izandla kaningi ngangokunokwenzeka. Sihlinzeka ngejimu nekhefi ukuze isivakashi singacikeki ngesikhathi sokuhlala kwaso. Indawo yethu iseduze nezinye izindawo ezithakazelisayo njengalezi: ithala lerayisi, ipulazi lekhofi, ipaki yendlovu, i-elephant safari park, imizuzu engu-10-15 ukushayela ukuya emakethe ye-bud, istudiyo somculi we-keliki, njll. Indawo yethu yokuhlala ingafinyelelwa ngemoto nesithuthuthu. Siphinde sinikeze indawo yokupaka yamahhala phambi kwe-villa yethu. I-villas ngayinye inechibi langasese elingapheli elibheke ensimini yerayisi futhi litholakala entshonalanga. Ungaphuthelwa ukuthwebula izikhathi zakho ngesikhathi sokuhlala! I-villas ngayinye inendlu yokugezela evulekile lapho ungajabulela khona isikhathi sokugeza. I-instagramable ngempela! Bheka i-IG @ The Megananda yethu ukuze uthole ezinye izithombe!
I-villa izungezwe insimu yerayisi. Yindawo yemvelo lapho ungaphunyuka khona esiminyaminya esinomsindo. Kuyi-villa ye-instagramable elungele inhloso yokuhlala yabavakashi noma izihambi eziyedwa.
Sifuna ukugcina isivakashi sethu ukuze sibe nendawo yokuhlala yangasese. Sizokwazisa isivakashi uma sesidinga ukungena ku-villa ukuze sihlanzwe nsuku zonke. Futhi senza isaziso kusengaphambili uma sineshejuli yokulawula izinambuzane e-villa. Sihlala sinabasebenzi bethu abakhokhelayo kusukela ekuseni kuze kube kusihlwa ngisho nabalindi basebusuku. Ngakho-ke isivakashi esihlala nathi siyakwazi ukuxhumana nathi noma nini uma sesidinga usizo lwethu.
Sifuna ukugcina isivakashi sethu ukuze sibe nendawo yokuhlala yangasese. Sizokwazisa isivakashi uma sesidinga ukungena ku-villa ukuze sihlanzwe nsuku zonke. Futhi senza isaziso kus…
UAnda Ungumbungazi ovelele